Xaaska Thiago Silva oo weerar ku qaadday Timo Werner – Gool FM
Xaaska Thiago Silva oo weerar ku qaadday Timo Werner
(Blues) 28 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa soo bandhigtay awoodeeda ciyaareed kulankii ay xalay Real Madrid ku wada ciyaareen lugta hore ee semi-finalka Champions League.
Kooxaha Real Madrid iyo Chelsea ayaa dhibcaha ku qeybsaday garoonka Alfredo Di Stefano, kulanka lugta hore afar dhammaadka Champions League, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 1-1 ah.
Inta ay ciyaarta socotay Timo Werner uu ku guuldareystay inuu ka faa’iideysto fursad aad u fudud oo uu ku helay goolhaayaha kooxda Real Madrid ee Thibaut Courtois, wuxuuna halkiisa ka sii watay nasiib xumida ka heysata dhanka gooldhalinta.
Haddaba Xaaska Thiago Silva ee Isabelle da Silva oo gurigeeda ka daawatay ciyaartii xalay dhex martay kooxaha Real Madrid iyo Chelsea, ayaa muujisay sida ay kaga carootay fursadii cajiibka aheyd uu Timo Werner ka qasaariyay Blues.
Muuqaal ay Instagram-ka soo gelisay waqtigii nasashada ee ciyaarta ayay ku tiri Isabelle da Silva:
“Kani waa wiil nasiib-daran, koox kastaba waxa ay leedahay weeraryahan goolasha khasaariya… Werner-kan, muxuu ahaa magaciisu?.”
Xoogaa yar kaddib ayay haddana Isabelle da Silva muuqaal kale soo gelisay barteeda waxaana ay ku tiri:
“Waxaan u baahannahay gool, waxaan u baahannahay in aynu guuleysanno kulankan, laakiin weeraryahannadani ma doonayaan inay goolal dhaliyaan, ma garanayo sababta ay u dhalin la’ yihiin.”
Wargeys kasoo baxa dalka Taliyaaniga oo daaha ka rogay macallinka xiga ee Juventus